IWatermark Pro 2 yeeWindows - # 1 Win Watermark Iifoto App | Iplum iyamangalisa
IWatermark Pro 2 yeeWindows - # 1 Win Watermark Iifoto App
Asanda: 3 / 13 / 22
Iyafuna: 64 bit, 10, 11
Intsha ye-2022 iWatermark Pro 2 yeWindows. Watermark ukukhusela iifoto zakho / ubugcisa
I-iWatermark Pro 2 ye Windows 10 kunye ne-11 yeyona nto iphambili yokuphinda ubhale inguqulelo edumileyo yoqobo. I-interface yomsebenzisi iyaguquguquka, inomxholo kwaye isebenza kakuhle kwiimonitha eziphezulu. Le nguqulo ikwakhawuleza, iphuculwe ngakumbi kwaye iya kuqhubeka iphuculwa.
I-iWatermark isebenza njenge-digital watermarking app ezimeleyo kunye nezinye iibrowser zeefoto ezinjenge-Adobe Lightroom, iiFoto zikaGoogle, i-ACDSee kunye nabanye abaninzi. Ukuba ubeka iifoto zakho kwiwebhu ke nabani na angazithatha kwaye azisebenzise nantoni na ayithandayo. Musa ukukrazulwa, nokuba i-watermark encinci yedijithali iya kunceda ukukhusela ubukrelekrele bakho. I-Watermark 1 okanye amawaka eefoto ngexesha. Yenzelwe iWindows desktops zamva nje kunye neelaptops. Isetyenziswa ngabaqalayo, abalungileyo, kunye nemibutho emikhulu. Iinguqulelo ezikhoyo kuWin, IMac, Android kwaye iOS. Yenzelwe ukugcina ixesha labafoti.
Isoftware ePhambili ye-10 yeWatching Software 2020 – nguLiza Brown, Filmora
Ifuna 64 bit .Net Core 3.1.19 Runtime efakwe kuqala.
Cofa apha ukuze ukhuphele.
IWatermark Pro 2 yeeWindows - # 1 Win Watermark Iifoto zeApp App
Uphononongo: Eyona Software igqwesileyo iWatermarking
iWatermark Pro 2 yeFayile yePad
- elungiselelwe ukuphumelela i-10 kunye ne-11
- umba we-stegomark esisigxina kwi-win 11
- [Ilungisiwe] Kuwo onke amaxabiso asetyenzisiweyo ngoku amiselwe
- [Ilungisiwe] Kwiphaneli yeZiphumo, xa 'unobumba omncinci' ukhangelwa, yonke imifanekiso ephumayo igcinwa ngoonobumba abancinci izandiso. Xa ibhokisi yokukhangela 'unobumba abancinane' ingakhangelwa, yonke imifanekiso ephumayo igcinwa ngoonobumba abakhulu bazondiso.
- [Ilungisiwe] Ubungakanani bomfanekiso wemveliso utshintshile xa kungekho kutshintsha. Ngoku, umfanekiso wemveliso ugcina ubungakanani bawo bokuqala. Umfanekiso wemveliso ngoku ugcina umlinganiselo wawo. Umfanekiso wemveliso ngoku ugcina ukuxinana kwawo.
-isifakeli sisombulula umba wokusetyenzwa komfanekiso omnye ngokuphindaphindiweyo ngelixa ukhetha i-watermark entsha okanye i-watermark ehambayo.
-Ukulungiswa kwememori ekuqhubeni ukukhawulezisa ezinye izenzo.
- gcina ubungakanani befestile engundoqo kunye nemo yokuvula
-Isicatshulwa sesibambi-ndawo kwindawo yokugcina i-watermark kunye neebhokisi zemibhalo yee-watermark
ui: ukulungiswa kwiphepha lomxholo, iphepha lemethadatha kunye nephepha loluhlu lweewatermark
Ii-watermark: uphuculo kwi-watermarking yombhalo
-Iseto eziphuculweyo zokucoca ukubonisa kumsebenzisi xa isihluzo sivuliwe. kunye noseto lwe-inshurensi luhlala lunohlobo olunye lomfanekiso ubuncinane. uyilo lwe-ui ukuqinisekisa ukuba umsebenzisi akavuleli ngempazamo isihluzo kwaye akayazi.
- ukusetyenzwa ngokuhambelanayo. ngoku isebenzisa 3 cores. 50%+ ngokukhawuleza kunangaphambili.
- ngoku ukugcinwa ngokuzenzekelayo kwemveliso ephawulweyo kwifolda engagqibekanga enomhla / igama lexesha. ukugcina ngesandla kwisiqulathi seefayili kusafumaneka.
-Isusiwe + kunye ne-icon (ukwenza okanye ukucima i-waterark) ukuya ezantsi kwiphepha loluhlu lwe-watermark. ngoku indawo eyongezelelekileyo yeewatermark ezininzi.
- ezininzi ezahlukeneyo ui utshintsho.
-yongeza imigca yokubamba kwi-splitter ukwenza ubungakanani bendawo yemifanekiso ephambili. ngoku bamba ezi ngonqakrazo ukwandisa iiphaneli kwifestile engundoqo.
- ? i icon kunye nenombolo yoguqulelo isiwe kwikona esezantsi ekunene kwefestile enkulu.
-utshintshe ukususa umfanekiso ukuya 'kuCacisa uMfanekiso'
-Umboniso Wemveliso ulungelelaniswe ukuba ube nesisombululo esizimeleyo.
-yongeza i-watermark yedemo entsha ebizwa, 'iTag Metadata', ukubonisa amandla e-iWatermarks ukubonisa i-gps engabonakaliyo/exif/iptc metadata njengee-watermark ezisuka ngaphakathi kwe-watermark yombhalo
Enkosi kubo bonke abasebenzisi ngempendulo kunye neengcebiso, igcine isiza. Uncede ukuphucula i-app 1000% kwaye wayenza yaduma. Nceda zama iithegi ezibhaliweyo kwi-watermark yedemo entsha ekhankanywe ngasentla. Jonga ukuba zeziphi izinto onokuthi uzibeke kwiithegi ingakumbi ukuba ungumfoti wepro.
-ubukhulu obungakumbi kwimixholo yokubonisa isisombululo esiphezulu.
-icandelo elitsha legalelo livumela ukutsala kunye nokulahla iifoto kwiphaneli esezantsi kunye nokubonisa izithonjana
-icandelo elitsha lokungenisa livumela i-watermarking enye ngexesha okanye i-batch watermarking ngokulula.
-ii-watermark zedemo ezihlaziyiweyo
- isombulula ulungelelwaniso lwephaneli esezantsi
- Ukulungiswa kwesilumkiso se-Stegomarking ukukhumbuza umsebenzisi ukuba asebenzise inani eliqingqiweyo leetshaji ezisekelwe kumyalezo kunye nobukhulu befoto.
-ngoku ukhumbula ubungakanani befestile ngohlaziyo.
- ezinye izinto ezininzi. ukuphuculwa kunye nokulungiswa
enkosi kubasebenzisi ngayo yonke impendulo kunye neengcebiso.
-thumela ingxelo ngoku iquka ulwazi lwesys. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuqhagamshelana nathi ukuba unezimvo, iintsholongwane kunye/okanye iingcebiso. indlela ethe ngqo kwidesika yoncedo.
-yongeza ulwazi lwe-iptc ukusuka kwimvelaphi ukuya kwimifanekiso ephawulweyo (s)
-ukhetho olutsha. 'Vumela umboniso weprofayile yombala kumhleli' umsebenzisi okhethiweyo weprofayile yombala esetyenziswa kumhleli. icime ngokungagqibekanga. inokuguqulwa ukujonga ifoto kunye ne-watermark ngeprofayile yombala. icimile igcina amandla kunye ne-cpu.
-Isuse isilayidi sangasemva esahlukileyo se-opacity kwi-watermark yemizobo (iGraphics, QRCode)
-tshintsha iDemo Graphics watermark logo
-ukongeza 'Yenza iWhite Transparent' ukusebenza
-Iphepha elingaphambili utshintsho oluyingxubevange
- kwiqela lenjongo yemetadata ipref 'copy metadata from input to output file(ii)' ngoku yenza njengoko isitsho. 'Musa ukukopa idatha yeGPS ukwenzela ubumfihlo' xa ingakhange iqwalaselwe iyakukopa idatha yegps kwi(i)ifoto zewatermark.
-gcina i-watermark ngaphambi kokuba umsebenzisi ahambe.
- isibonisi se-stegomark silungisiwe
- izinto ezichazwe kulwazi zi
-iigraphics watermark utshintsho ezahlukeneyo
-lunye utshintsho olungalunganga.
-isifakeli ngoku sifaka kuphela iwatermark pro yokuphumelela. ayifaki .net.
Isifaki esitsha esibandakanya .net engundoqo engama-64 yokonga ixesha labantu kufakelo. Esi sikhokelo seMicrosoft sinezixhobo esizisebenzisayo.
- yongezwe umda osekunene kwi-Input, Output kunye ne-Import Buttons kwi-Watermark List Panel
- yongeza Cofa iqhosha kwimizobo yew watermark phantsi kweKhetha iqhosha-umba ofanelekileyo wokufunda kwi-z drive
-bandakanya imethadatha engaphezulu kumbonisi wolwazi lomfanekiso
Umcimbi ochanekileyo xa i-stegomark ingenayo iphasiwedi
-Igama leWatermark Pro 2 ukwahlulahlula kuhlobo lwangaphambili. oku kuya kuvela kumaxwebhu nakwincwadana yemigaqo.
-Unguqulelo yeWatermark Pro 2 yoWin ingasebenza ecaleni kwinguqulelo yoqobo ebizwa ngokuba yiWatermark Pro yokuphumelela ngaphandle komcimbi.
-Umcimbi wesicelo se-stegomark esisigxina
-Utshintshe indawo emitsha yokuseta umzobo we-watermark kunye nendawo ukuze ukhethe iilogo kunye neminye imizobo
- itekisi ebhaliweyo iphuculwe
-iidemo zee-watermark ezivaliweyo ukuze zingacinywa ngengozi.
- ii-watermark ngoku zijikeleza ngeenxa zonke embindini wazo
- opacity yazo zonke izinto ezikwii-watermark zibeke opacity yazo kunye.
Umbala ongasemva usetelwe kwaye wagcinwa ngoku.
-iifonti igama eliboniswe kuluhlu ngoku luboniswe kwisitayile sefonti
-Ukuphuculwa okuncinci kwigalelo nakwimveliso ui
- beta yokuqala
utshintsho lwangaphambili olwenziwe kwiWatermark Pro 1 efumaneka apha.
- alpha yokuqala
-Isebenza kakuhle kubaphengululi abaphezulu
-Urhuqeka ui uyanwenwa
- ezinye izinto ezininzi eziphuculweyo
Incwadana yemigaqo yeWatermark Pro 2 Win